Wasaarada Arimaha Gudaha DKMG ah "Lama Qaban karo Banaan bax ama shirar toona" – SBC
Wasaarada Arimaha Gudaha DKMG ah "Lama Qaban karo Banaan bax ama shirar toona"
Muqdisho- Wasaarada Arimaha Gudaha dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in aan la qaban karin shirarka ay qabsanayaan Odayaasha, Waxgaradka, Xildhibaanada iyo qeybaha kale ee bulshada rayidka ah ee lagu qabanayo hotelada caanka ah ee magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale ay wasaaradu joojisay in la qabto banana baxyada, hadii uu yahay mid dowlada lagu taageerayo in mid loogaga soo horjeedo labadaba iyadoo aan wax ruqsad ah laga heysan.
Hadii ay dhacdo in la qabto waxyaabaha ay wasaaradu joojisay ruqsad la’aan waxay noqoneysaa in lagu xadgudbay sharciga iyo nidaamka dalka u degsan .
C.shakuur Sh Xasan Wasiirka wasaarada Arimaga gudaha DKMG ah oo warfaafinta la hadlayay in tani ay tahay fariin digniin ah oo loo dirayo dadka banana baxyada iyo shirarka gaar gaarka ah muqdisho ku qabanaya kuwaas oo carqaladeynkara DKMG ah .
Dhinaca kale Taliska Ciidanka Police-ka DKMG ah oo xalay qadka Telfoonka shir Jaraaid ugu qabtay qalabka warbaahinta ayaa sheegay in maalinta berito ah oo maanta ku began la qaban qaabinayo Banaan bax, oo uu sheegay in qaabka uu u dhacayo ay dowladu si aad ah u saluugsantahay .
Waxa uu sheegay in banana baxaasi aan la qaban Karin islamarkaana hadii la qabanayo banana baxyo iyo shirarba ay waajib tahay in la soo ogeeysiiyo taliska Ciidanka Police-ka, isagoona ku hanjabay in hadii ay dhacdo ogeysiin la’aan uu cagta marin doono banana baxyadaas.
Shariif Shiiqunaa Sh Maye Taliyaha ciidanka Police-ka oo isagu dhowaan loo magacaabay ayaa saxaafada ka sheegay in arimahaasi ay wax u dhimi karaan amaanka ayna iska horkeen ku tahay shacabka iyo ciidanka Police-ka .
Sikastaba ha ahaatee arimahan oo dhan ayaa waxa ay qeyb ka noqonayaan khilaafaad sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa oo u dhexeeya labada gole ee dowlada KMG ah maadaama banaan baxyadan la sheegay ay ku taxaluqaan ka soo horjeesashada labada dhinac midkood .